2017ပြီလ4| 87 ၏စာမျက်နှာ 2020 | NAB သတင်းများ | XNUMX NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » ဧပြီလ (စာမျက်နှာ 4)
သဟဇာတပု 2017 NAB Show မှာနယူးမြင့်မှ OTT QoE တွန်း
San Jose, ကာလီဖိုးနီးယား - ဧပြီလ 22, 2017 - ထို 2017 NAB ပြရန်မှာသဟဇာတ (NASDAQ: HLIT) ။ , ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်အတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုမောင်းထုတ်ရန်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးဖွင့်, OTT ပေးပို့ဘို့အများအပြားသဲဖြေရှင်းနည်းများကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်အတှေ့အကွုံ (QoE) ၏တိုးတက်လာသောအရည်အသွေးကိုနှင့်အတူ over-the-ထိပ်တန်းဗီဒီယိုကိုစားသုံးမှု။ OTT bandwidth ကို optimization အတွက်တီထွင်မှုများမှတဆင့်အောင်းနေချိန်နှင့် ...
အဆိုပါ 360 NAB Show မှာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဇာတိ UHD 2017-ဒီဂရီ VR, အတွေ့အကြုံများဝေငှအထိသဟဇာတနှင့်အပြာရောင်က Man Group မှအဖွဲ့
San Jose, ကာလီဖိုးနီးယား - ဧပြီလ 21, 2017 - ထို 2017 NAB ပြရန်မှာသဟဇာတ (NASDAQ: HLIT) ။ , ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်နှင့်အတူ 360 ဒီဂရီစွဲငြိဖွယ်ရာ virtual reality (VR) နည်းပညာအတွက်ဖြတ်တောက်-အစွန်းတီထွင်မှုတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Las Vegas မှအတွင်း Luxor Hotel နှင့်ကာစီနိုမှာသူတို့ရဲ့စင်မြင့်ကနေအပြာရောင်က Man Group ၏ prerecorded အကြောင်းအရာ featuring တစ်ဦးဆန္ဒပြ။ ယင်းအပြင် ...
Riedel Intelligent User Interfaces ကို၏ကြီးထွားလာလိုင်းမှ Desktop ကို SmartPanel ထည့်ပေးသည်
WUPPERTAL, ဂျာမနီ - ဧပြီလ 24, 2017 - ထို 2017 NAB ပြရန်မှာ Riedel အသိဉာဏ်အသုံးပြုသူ interfaces ၏ SmartPanel မိသားစုတစ်စု၏နောက်ဆုံးပေါ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် DSP-2312 Desktop ကို SmartPanel မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အစွမ်းထက်ဘက်စုံသုံး user interface ကို, app ကိုမောင်းနှင် SmartPanel အဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး keypanel အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုကြွယ်ဝစေခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူများကိုဆက်သွယ်ဖို့လမ်းကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါ All-သစ်ကို desktop ပေါ်မှာ ...
Riedel MediorNet မြင်ကွင်းစုံ App ကို MediorNet ဂေဟစနစ်မှဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးမြင်ကွင်းစုံစှမျးထည့်ပေးသည်
WUPPERTAL, ဂျာမနီ - ဧပြီလ 24, 2017 - သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, လမ်းကြောင်းများနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အချက် Riedel MediorNet ရဲ့ကျတ်ကွန်ယက်ကိုချဉ်းကပ်ဖို့ ပို. ပင်ဘက်စုံရှိမယ်, အ MediorNet မြင်ကွင်းစုံတို့သည် 2017 NAB Show မှာက၎င်း၏ပွဲဦးထွက်စေမည်။ MediorNet မြင်ကွင်းစုံတစ်ဦးကို virtual မြင်ကွင်းစုံ app ကို MediorNet Micron High-density ကိုမီဒီယာဖြန့်ဖြူးဟာ့ဒ်ဝဲအပေါ်အခြေခံပြီးနှင့် MediorNet ကွန်ရက်အတွင်း၌အလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သက်တမ်းတိုးရေးအတွက် ...
အမေရိကန်ကိုယ်စားပြုမှုများအတွက်မီးပြတိုက်ရုပ်ရှင်လက္ခဏာတွေဒါရိုက်တာ Pepe Lansky နှင့်ယူလနျြ Rocher
နယူးယောက်, နယူးယော့ - (ဧပြီ 26, 2017) - နယူးယောက်အခြေစိုက်စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီမီးပြတိုက်ရုပ်ရှင်ရုံအမေရိကန်ကိုယ်စားပြုမှုအဘို့, tabletop အစားအစာညွှန်ကြားရေးမှူး, Pepe Lansky နှင့်ကားတစ်စီးညွှန်ကြားရေးမှူးယူလနျြ Rocher လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကစစ်မှန်တဲ့ visualist, Pepe LANSKY ရောနှောလူတွေရဲ့စားချင်နှင့်စိတ်ခံစားမှုထိတွေ့ဆက်ဆံ, ကြော့ရှင်းနဲ့သူ့ရဲ့အစားအသောက် tabletop အလုပ် infuses ။ ပဲရစ်, ကမ္ဘာ့ gastronomic မြို့တော်အခြေစိုက်, Pepe မ ...
Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub မှအဆင့်မြှင့်မှုများကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်
Denver - ဧပြီလ 25, 2017 - Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်, Cloud-ဇာတိကဗီဒီယိုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်လိုင်စင်န်ဆောင်မှုများ၏ဦးဆောင်မှုပေးသူ, ယနေ့ Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub, အချိန်လေးဖမ်းမိခံရဖို့အနီးရှိ-တိုက်ရိုက်ခွင့်ပြုတစ်ခုတည်းသောဗဟိုမှ, web-based စနစ်အဆင့်မြှင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာ ထိုအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပျက်နေသည်အဖြစ်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပျေါလှငျ, ထုတ်ဝေ, နှင့်စုစည်းဘို့ချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါစေတော်မူ၏။ အဆိုပါအဆင့်မြှင့်တင်မှုနှင့်အတူအဓိကနှစ်ခုလာ ...
#NABShow 2017: ထုတ်လုပ်သူ Spotlight ကို: Blackmagic ဒီဇိုင်းထံမှ NAB သတင်းများ!
အဆိုပါ #NABShow 2017 ထုတ်လုပ်သူသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်ထုတ်ကုန် updates များကိုအတူထုပ်ပိုးထားသည်။ Blackmagic ဒီဇိုင်းသူတို့အားအရှင်သောနေ့ရက်သည်ငါတို့ထုတ်လုပ်သူ Spotlight ကိုအောင် shared ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်အချို့သိသိသာသာသတင်းရှိပါတယ်! အဆိုပါအများကြီးများလွှတ်ပေးရေး DaVinci 14 ပို့စ်ထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာအနှံ့လှိုင်းတံပိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဖြေရှင်းမျှော်မှန်း။ အဆိုပါ feature အသစ်များ 10 အားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်တိုးတက်မှုများပါဝင်သည် ...
HEBDEN တံတား BRIDGE, ဗြိတိန် - 24 ဧပြီလ 2017 - Calrec အသံဟာ 8 NAB Show မှာအတူတကွသစ်ကို Brio တိုးမြှင့်မှုများနှင့်အတူ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ် V2017 software features တွေနှင့်အတူခိုင်မြဲစွာမောင်းနှင်မှုထိုင်ခုံများတွင်ထုတ်လွှင့်လိုက်တယ်။ V8 တိုးတက်လာသော RP1 ထောက်ခံမှု, switchable 96-kHz သို့မဟုတ် 48-kHz နမူနာနှုန်းထားများနှင့် Calrec ရဲ့နောက်ထပ်ပေါင်းစည်းမှုအပါအဝင် Calrec ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးအစွမ်းထက်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၏နံပါတ်မိတ်ဆက် ...
4 ၏စာမျက်နှာ 87«ပထမဦးစွာ...«23456 » 102030...နောက်ဆုံး»